Na ngwa mmepe nke aku na uba, ndị chọrọ nke oge a na ahịa maka njem na ngwá na-elu elu. Olee na-eguzo na n'etiti ọtụtụ njem na ngwá aghọwo n'ọdịnihu development direction nke njem na ngwá. The ịghasa ebu agwakọta oge a nwere ọgụgụ isi, controllable na akpaka ndakọrịta technology, na-eme na-ịghasa ebu ihe oru oma na-aghọ ihe na-ekpo ọkụ na-achụ na-erute ụlọ ọrụ.
Definition nke ịghasa ebu
The ịghasa ebu, a maara dị ka ndị winch, iji n'usoro pupụtara ibufe ihe onwunwe tinyere ịghasa ebu. The ike na ihe na-adịghị bugharia na agụba nke ịghasa ebu bụ ihe onwunwe dị arọ na esemokwu ndị na-eguzogide nke ịghasa ebu ụlọ na ihe onwunwe. Helical pupụtara welded na rotary okporo ịghasa ebu nwere siri ike n'elu ala, belt ụdị elu ma agụba n'elu ụdị dị ka dị iche iche erute ihe. The ịghasa aro nke ịghasa ebu ka setịpụ amị na njedebe nke ntụziaka nke ihe onwunwe ije na-enye axial counterforce na ịghasa na ihe onwunwe. Mgbe onyeisi bụ ogologo, n'etiti nghọta amị ga-ahụ kwukwara. Ọ bụ a conveyance ngwá ọtụtụ-eji ịnweta, ndepụta, ọka na mmanụ, na-ewu ụlọ ọrụ. Ọ na-mere ígwè na-eji erute chemical na ụlọ ihe dị ka ntụ ntụ ma ọ bụ siri ike ahụ na elu okpomọkụ.
The arụ ọrụ ụkpụrụ nke ịghasa ebu na-erute ihe na ihu ọma kere atọ ige: otu ụdị na-n'ịgba, otu ụdị bụ centrifugal itinye n'ọkwa, na ụdị ọzọ bụ ike ndọda eji;
Nke a na ụdị usoro n'ozuzu iji gburugburu agụba maka erute ihe, nke a na-eji maka ebutu njem na ala nke ụlọ nkwakọba ihe. Spirals tube na-abụkarị zuru nke ihe, na static mgbali nke granular ihe bụ dịtụ elu. The ike ndọda nke ọ bụla granule dị nnọọ nta karịa ndị ọzọ agha (ịghasa nzube, esemokwu, static mgbali). Ndị na-eguzogide ndị dị otú ahụ a gburugburu dị nnọọ ukwuu, na ọ nwere iji merie esemokwu kpụrụ n'okpuru elu nsogbu. The ihe onwunwe yiri ka a nut na-arụ ọrụ, na ịghasa agụba dị ka a ịghasa. Dị ka ogologo oge dị ka aku anaghị bugharia (ma ọ bụ bugharia nwayọọ nwayọọ), na aku nwere ike kpaliri tinyere axial direction site adiana nke ịghasa. The ebutu ịghasa na ala nke igwe a na-eji na-agbanwe pitch, nke bụ ibu na tinyekwa ọgwụgwụ.
(2) centrifugal itinye n'ọkwa
Centrifugal igwe na-eji maka vetikal gburugburu conveyors na nkpoda nchepụta, ma ọ bụ ọ bụla gburugburu conveyors na elu n'usoro ọsọ. The na-arụ ọrụ e ji mara ya bụ na ihe onwunwe ndochi ego bụ n'etiti ha. N'okpuru elu n'usoro ọsọ nke ịghasa, omume rụrụ ihe nke ukwuu emetụta centrifugal agha, dị nnọọ kpọmkwem nnukwu mpo ike na ndị ọzọ mpụga agha.
(3) ndọda eji
The n'usoro ọsọ nke ịghasa bụ dịtụ ala, na ihe onwunwe na ịghasa n'elu na-ukwuu emetụta ike ndọda karịa centrifugal ike. Dị ka n'usoro ihe nke ịghasa-eme eji tinyere ịghasa, axial Ndahie na-eme. CX ịghasa igwe ihu ọma bụ nke ụkpụrụ a. Ndochi ọnụọgụ nke ụdị ịghasa igwe na-abụkarị ihe na-erughị 0,5. N'ihi na nke ukwuu ndochi, ihe anaghị slide ala tinyere helix elu, ma na-kpaliri site helix-eme ka ọ na-ada n'elu helix axis, na-apụghị inweta nnukwu axial ike ọsọ. Ebe ọ bụ na ihe onwunwe nke onye na-adịghị helix na-ukwuu na-emetụta ike ọdụdọ, o doro anya na o nwere ike ọ gaghị eji maka vetikal helical ma ọ bụ gaba n'iru njem na nnukwu echiche.
The eji usoro ụkpụrụ, ọ bụ ezie na uru bụ obere, ala-erute ikike, ma ihe bụ na free Rolling steeti mfe dispersing, bụ obere n'okpuru extrusion, adabara mfe caking, egweri nnukwu ihe onwunwe. Mgbe na-eji ọkọlọtọ ịghasa, nwere ike ọ bụghị nanị na-na ngwa ngwa ọsọ eji ala, nwere ụfọdụ ikike imeghari ka awụfu ebu (general n'ime n'akuku 20 Celsius).
Mmezi nke ịghasa ebu
Dị ka ihe owuwu nke ịghasa ebu na-emi esịnede ịghasa shei akụkụ, na-akwọ ụgbọala akụkụ ma na-akwado akụkụ, mmezi ma na mmezi nke ịghasa ebu ga-ekewa akụkụ. Ịghasa ebu akụkụ nke shei akụkụ mmezi, n'ihi na shei na-n'ozuzu bụghị mebiri emebi, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ndị acid-alkali corrosive ihe kwesịrị ịkpachara anya ọcha ebu shei mgbe nkwụsị. The na-akwọ ụgbọala nke ịghasa ebu na tumadi ekewet nke abụọ na isi akụkụ nke ọ bụla moto nke reducer. N'ihi na ụdị na-achọ mmanụ ogwu ogbugba, na ọ ga-anọchi nditịm na mgbe nile, nke bụ Ẹkot obi akụkụ nke erute akụrụngwa. Ya mere, mmanụ ga-anọchi anya na a-adọ ha n'ụzọ.